10 jolay — Ulrich roa no horesahantsika esto. Ny voalohany dia taranaka andriana allemand. Mpiandraiki-draharahan’ny impératrice germanique Agnès d’Aquitaine, vadin’i Henri III. Avy eo moa izy niditra tao amin’ny fikambanana bénédictin ka nankany Cluny ary tao no nahafantarany an’i Masindahy Hugues, lehiben’ny fikambanana clunisien.
Lasa mpitan-tsoratra io pretra io izy, ary nanandrana ny hampihavana an’i Henri IV empereur germanique sy ny papa Grégoire VII. Nanorina trano fitokana-monina roa ihany koa i Ulrich, ny iray tao Rüeggisberg akaikin’ny Berne ary ny iray tao Zell akaikin’i Fribourg Brisgau, izany hoe amin’ny faraparan’iny Forêt Noire iny, ary tao amin’izany toerana izany Ulrich no nalevina ny taona 1903. Ny fiangonana sy ny toeram-pivavahana amin’izao fotoana izao dia dia navaozina tamin’ny taona 1739-1740 ka architecte autrichien iray no nanao izany fanavaozana izany.
Ny Ulrich faharoa dia ilay evaka tao Augsbourg. Ulrich na Udalric no fiantsoana azy izany. Teraka ny taona 890 io eveka io ary maty ny 973. Nalevina tao amin’ny fiangonana Masimbavy Afre tao Augsbourg izy izay nampitondraina ny anarany taty aorina. Ny evaka tao Ratisbonne, i Monseigner tao Wolfgang no nitarika ny Sorona Masina fandevenana azy. Taty aorina dia naneho fahagagana teo amin’izany fasana nandevenana azy izany izy, toy ny fanasitranana jamba, ny moana, ny malemy, ary niely tany Belgique ny fanajana an’i Ulrich ka niitatra hatrany Alsace. Ny anabaviny nantsoina hoe Liutgarde vadin’i Burchard II moa izay duc de Souabe no nanaja sy nampiely izany lazany izany. Antsoina i Masindahy Ulrich hivavaka ho an’ireo nokakerin’ny alika sy ny voan’ny raboka.